”Waar muusigga naga gaabi” – Romelu Lukaku oo la dacweeyay! – Gool FM
”Waar muusigga naga gaabi” – Romelu Lukaku oo la dacweeyay!
(Los Angeles) 09 Luulyo 2017 – Laacibka Romelu Lukaku ayaa caafimaadka u maray kooxda Manchester United oo lagu wado inuu kula biiro 85 milyan oo euro (oo lagu daray 17 oo bareemiyo ah).
Yeelkede, 24-jirkan reer Belgian ayaa laga soo eed sheegtay villa uu ka deganaa Beverly Hills, California, halkaasoo la sheegay inuu kula cawaynayay dad asxaab ah, waxaana loogu wacay booliiska iyadoo lagu qabsaday inuu muusig ku dheereeyay dersaantiisa.
Sida ku dhigan Tmz, waxaa laacibka halkaa ku wehlinaya Paul Pogba oo ay xitaa isla tababaranayeen, Sergeant Jay Kim ayaa sheegay inay heleen ilaa 5 wicitaan, waxayna kahor dersaantu ka codsadeen inuu muusigga ka gaabiyo.
Wuxuu sheegay inaan la katiinanadaynin, ama aan loo kexeeynin saldhigga booliiska, balse waxaa 2-da Oktoobar laga sugayaa maxkamadda sare ee Los Angeles ee Los Angeles Supreme Court.
Kooxda AC Milan oo suuq-jiilaalka Jannaayo doonaysa Luka Modric haddii...